Kaôdaisma - Wikipedia
Ny kaôdaisma dia fivavahana mifangaro mino ny fisian' ny Andriamanitra tokana, niforona tamin' ny taona 1921 sady najoron' i Ngô Văn Chiêu (1878 -1932) mpiasam-panjakana vietnamiana, tany Cochinchina (tapany atsimon' i Vietinamy ankehitriny) tamin' ny taona 1925. Nilaza ho nihaoa tamin' ny fanahy i Ngô Văn Chiêu. Ity fanahy ity dia nianitso ny tenany hoe AĂÂ (anarana foronin' ny litera telo voalohany ao amin' ny abidy vietnamiana), avy eo Cao Dai Tien Ong. (ny hoe Cao Dai dia midika hoe "Zanahary fara tampony") ka nandidy an' i Ngô Van Chiêu mba hamorona ny kaôdaisma. Naniry ny hifantoka amin' ny fiainana ara-panahy i Ngô Văn Chiêu fa tsy amin' ny pôlitika.
Fanompoam-pivavahana ao amin' ny tempoly kaôdaista any Vietnamy
Tempoly kaôdaista ao de Tây Ninh any Vietnamy
Ny mpino ao amin' io fivavahana io dia manatateraka vavaka, manompo ny razana, tsy tia herisetra, ary mihinana zavamaniry, ka ny tanjona dia ny firaisana amin' Andriamanitra sy fahafahana amin' ny saṃsāra (fifindrafindran' ny fanahy avy amin' ny zava-manana aina iray mankamin' ny zava-manana aina hafa aorian' ny fahafatesana).
Ny mpitarika fara tampony ny kaôdaisma (Giáo Tông "papa") dia i Lê Văn Trung (1876 - 1934). Tamin' ny taona 1926 no naneken' ny fanjakana mpajana-tanin' i Indôsina Frantsay an' ity fivavahana ity. Misy mpino miisa 5 tapitrisa izy tamn' ny fianfohan' ny taonjato faha-21.
Fivavahana ao Vietnamy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaôdaisma&oldid=1039032"
Dernière modification le 17 Oktobra 2021, à 12:42
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 12:42 ity pejy ity.